I-Apple ihlola amadivayisi ayo e-AR ne-VR ngomshayeli ofana ne-HTC Vive | Ngivela kwa-mac
I-Apple ihlola amadivayisi ayo e-AR ne-VR ngomshayeli ofana ne-HTC Vive
Cishe wonke amagama asemqoka okugcina lapho i-Apple yethule khona i-iPhone ne-iPad entsha, inkampani esekwe eCupertino ikhulume ngamathuba amadivayisi ayo ngeqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona, amathuba okwamanje okubonakala sengathi umphakathi wonjiniyela awunantshisekelo.
IPad Pro entsha eyethulwe yi-Apple ngesonto eledlule ngqo kwiwebhusayithi yayo, ihlanganisa inzwa ye-LIDAR, inzwa ekwaziyo linganisa amabanga ngendlela eshesha kakhulu futhi elula ukwedlula ngekhamera njengoba besingakwenza vele nge-iPhone ngohlelo lweMilinganiselo.
Amahemuhemu wakamuva ahlobene neqiniso elingathandwa kwabakwa-Apple, silithola ezindabeni esazishicilela ezinsukwini ezimbalwa ezedlule lapho iDigitimes ithi I-Apple izokwethula idivayisi yayo engathandwa kwabathelisi esikubona ngo-2022. I-MacRumors medium, ebinokufinyelela kunguqulo ye-iOS 14, ithole okuningi imininingwane ehlobene neqiniso langempela.
Kepha ngaphezu kwalokho, ubekwazi nokufinyelela esithombeni esibonakala sikhona ukulawula idivayisi yangempela futhi engathandwa kwabathelisi esikubona, Ngomklamo ofana ncamashi nalowo esingawuthola njengamanje ku-HTC Vive, idivayisi eyethulwe ngo-2016 emakethe.
Ngo-2017, uMark Gurman wathi onjiniyela be-Apple bebesebenza ngehardware ye-HTC ukuhlolwa kwangaphakathi, imininingwane eqinisekiswe ngamahemuhemu okuthi zombili izinkampani bezisebenza ndawonye kudivayisi entsha ye-AR / VR.
Njengoba sikwazi ukubona esithombeni, design design ilula kakhulu, ngakho-ke ukubonakala kwayo kokugcina kungenzeka akuhlangene nalokho i-Apple ehlela ukusinikeza kona lapho yethulwa ngokusemthethweni eminyakeni embalwa, yize ngenxa yalolu bhubhane sihlupheka futhi asazi ukuthi luzohlala isikhathi esingakanani, lungathinta ukuthuthuka kwayo kanye nokwethulwa kwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Apple ihlola amadivayisi ayo e-AR ne-VR ngomshayeli ofana ne-HTC Vive
Uhlobo olusha lwe-Safari Technology Preview manje seluyatholakala
Faka amaphephadonga we-Apple TV ku-Mac yakho